RN outdoor- 20 years continue to focus on ODM Logo Single Layer Windproof Waterproof Outdoor Hooded Men Work Jacket , နှင်းလျှောစီးအောက်ပါအတိုင်း, ထုတ်ကုန်, outdoor jacket, cotton-padded clothes, clothing manufacturers, We cooperate with many famous brand such as CK, South Korea napping etc. in OEM or ODM.
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။: ODM Logo Single Layer Windproof Waterproof Outdoor Hooded Men Work Jacket
Manufactury: အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။
ထုတ်ကုန် : 50 ထုတ်ကုန်, 300 free samples
Delivery time: 50 အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။ - 10 အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။, 300 အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။ - 20 အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။